I-Pimex: Lawula kwaye wenze imali ngeeNtloko zeNtengiso zakho | Martech Zone
I-Pimex: Lawula kwaye wenze imali ngeeNtloko zeNtengiso
NgoMvulo, Septemba 19, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Asinalo iqela lophuhliso loshishino kwiarhente yethu, ke siyazi ukuba siphulukana nomkhondo kwaye sikhangele amathuba anokugqibelela. Hubspot iingxelo I-79% yezikhokelo zentengiso aziguquki kwintengiso. Ukongeza:
Iipesenti ezingama-25 zabathengisi ezamkela iinkqubo zolawulo ezivuthiweyo zokukhokela zixela ukuba amaqela athengisayo anxibelelana namathemba ngaphakathi kosuku olunye.
IPimex iphehlelele kwi-beta, ivumela abasebenzisi ukuba benze iimpendulo ezizenzekelayo ezanelisa isidingo esikhawulezileyo solwazi kulowo uza kuba ngumthengi. Kufana nokuba neqela lokuThengisa elingu-24/7, ukuqinisekisa ukuba umthengi okwi-intanethi emva kwexesha uza kufumana impendulo ngokukhawuleza kwimibuzo yakhe.
Iqonga livumela abathengisi kunye namaqela okuthengisa ukuba:
Hlela izikhokelo ze-organic kunye neentlawulo zazo
inkcukacha kubahlalutyi ngokubhekisele kumathemba
Nika uhlaziyo lwexesha lokwenyani ngobume bezikhokelo zakho
Phendula iimpendulo kwizikhokelo ezisandula ukufika
The IPimex iqonga livumela abathengisi kunye namaqela okuthengisa ukuba bafumane ulwazi lwexesha-lokwenyani elinganikwanga njengesiqhelo kubahlalutyi izixhobo. I-Pimex ayisiyo okhuphisana nayo kwisoftware yeCRM kodwa endaweni yoko iyayincoma kumashishini amancinci ukuya kwaphakathi.
I-Pimex okwangoku isimahla ukuyivavanya, kwaye isebenza kuso nasiphi na isixhobo esinonxibelelwano kwi-Intanethi, kwaye kuba iqonga lizimele kwaye alidingi amanye amaqonga, liyazibeka lodwa ngaphandle kwabo bakhuphisana nabo.
tags: Ukuphendula ngokuzenzekelayoulawulo oluphambiliimpendulo ekhokelayoUkwenza imali kukhokelelaikopi
Ukubeka uphawu kuLuntu kwiMithombo yeendaba yeNtlalo yeyona ntengiso inganyanisekanga ekhoyo